बिबाह भएको पुरुषसँग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन कारणहरु ! – Dainik Samchar
January 17, 2021 599
हरेक महिला आफ्नो पार्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन त्यसैले महिला हरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन तर कोहि महिला भने बिहे भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन कारण एस्तो छ हेर्नुहोसहाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । हालसालै गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ
Prevकाठमाण्डौंको टोखामा भएको उक्त घटनामा उमेशको मृत्युको लामो समयसम्म सुदिक्षा जिवित रहेको पाइएको थियो ।
Nextसडक दुर्घटनामा परेर कतारमा एक नेपालीको निधन